‘पोखरा मल्टी मोडलमा पारिवारिक वातावरणमा पढाई’ – Arthik Awaj
‘पोखरा मल्टी मोडलमा पारिवारिक वातावरणमा पढाई’
By आर्थिक आवाज २०७५ आश्विन १६ गते मंगलवार ११:२५ मा प्रकाशित
पोखरा मल्टी मोडल क्याम्पस
पोखरा मल्टी मोडल कलेज बिगत १३ वर्षदेखि पोखराको सिर्जनाचोकमा सञ्चालनमा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर बिबिएस कक्षा सञ्चालन गरिरहेको कलेजले अहिले भर्ना लिइरहेको छ । यसैक्रममा कलेजका विशेषता, विद्यार्थीको आकर्षण लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष लिलाधर बरालसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीको सारः
क्याम्पस स्थापना गर्ने सोच कसरी आयो ?
२०५६ सालमा पोखरा मल्टिमोडल क्याम्पसको स्थापना भएको हो । वौद्धिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व मिलेर शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले क्याम्पस स्थापना गरेका हौं । उद्देश्य अनुसार हामी सफल पनि भइरहेका छौं र थप सफलताका लागि अग्रसर छौं । उत्कृष्ट नतिजा सहित पोखराको केन्द्रमा क्याम्पस संचालन गर्न सफल भएका छौं ।
क्याम्पसमा कुन–कुन विषय पढाई हुन्छ ?
हामीले प्लस टुु मा विज्ञान र व्यवस्थापन तथा स्नातकमा बिबिएस अध्यापन गर्दै आइरहेका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्नातक तह सञ्चालन गरेका छौं ।
क्याम्पसका विशेषता के–के छन् ?
दक्ष तथा अनुभव प्राप्त प्राध्यापक हुनुहुन्छ । सस्तो तथा सुलभ शुल्कमा विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्ने वातावरण बनाएका छौं । सैद्धान्तिकका साथै प्रयोगात्मक विधीको प्रयोग गरेर शिक्षण गर्दै आइरहेका छौं । अँग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यममा पढाई हुन्छ । शान्त वातावरणमा कलेज छ । पूर्ण पारिवारिक वातावरणमा हामीले शिक्षण गर्छौैं । समय समयमा विभिन्न विशेषज्ञहरु बोलाएर सेमिनार तथा गोष्ठी गर्ने गरेका छौं जसले विद्यार्थीलाई अध्ययनमा थप सहयोग पुग्छ । औपचारिक शिक्षा मात्र नभई अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि संचालन हुने गरेका छन् । अनुशासित तथा मर्यादित वातावरणमा पढाई हुन्छ । जेहेन्दार तथा न्युन आर्थिक आय भएका विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्तिको विशेष व्यवस्था छ । गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएका छौं ।
क्याम्पसमा विद्यार्थी आकर्षण कस्तो छ ?
विद्यार्थी संख्या राम्रो छ । पोखरा मात्र नभई यस आसपासका जिल्लाका विद्यार्थी पनि कलेजमा अध्ययन गर्न आइरहेका छन् । अहिले बिबिएसको लागि भर्ना चलिरहेको छ । बैकिङ, प्रशासनिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रा विद्यार्थीको राम्रो सहभागिता देखिन्छ । पोखरा मल्टी मोडल कलेजमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयको अनुभव भएका दक्ष प्राध्यापकहरुद्वारा पठन पठान हुने हुँदा क्याम्पसको शिक्षा निकै गुणस्तरीय छ । प्रशस्त क्षेत्रमा फैलिएको क्याम्पस हरियाली वातावरणमा अवस्थित छ । पारिवारिक वातावरणमा स्तरीय शिक्षा अध्ययनका लागि म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई पोखरा मल्टी मोडल क्याम्पसमा आउनका लागि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु ।